रेखाको झटारो कोप्रति ? – Pokhara Voice
By देबेन्द्र एस के	 On १४ फाल्गुन २०७६, बुधबार २०:१५
अभिनेत्री रेखा थापा निर्धक्क आफ्नो विचार राख्न हिचकिचाउँदिनन् । कुनै समय फिल्ममा लगाउने छोटा पहिरनका कारण चर्चामा छाउने उनी पछिल्लो केही वर्षयता आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण चर्चा र विवादमा आउने गरेकी छन् । सामाजिक, राजनीतिक र फिल्मका मुद्धामा उनी बाक्लै रुपमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् होस् वा अन्य प्ल्याटफर्मबाट आफ्नो तर्क राखिरहेकी हुन्छिन् ।
गएको हप्ता उनी एक महोत्सवमा सहभागी हुन् दाङ पुगेकी थिइन् । महोत्सवमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि चलचित्र पत्रकार संघ, नेपाल दाङ शाखाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा रेखाले समाजमा महिलाको अवस्था र फिल्म क्षेत्रका विभिन्न विषयमा आफ्नो विचार राखिन् । उनले आफूले बनाउने फिल्म अभियान रहेको बताउँदै आफ्नो यो अभियान सधैं चलिरहने बताइन् ।
उनले आफूलाई सिंगल थिएटरको अभिनेत्री भन्ने गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । अभिनेत्री रेखाले भनिन्, ‘अहिले देशभर सिंगल थिएटर मल्टीप्लेक्समा रुपान्तरित भैसकेका छन् । विदेशतिर अहिले पनि पुराना नायकहरुलाई यो त मेरो फ्यान भन्छौं । हाम्रो बुबाको उमेरका सलमान खान र अक्षय कुमार बुढो नहुने अनि यहाँ चाहिँ निखिल उप्रेती बुढो हुने ? विराज भट्ट एक्सपायरी हुने ?’
उनी कुनै पनि कलाकारलाई सिंगल थिएटर र मल्टीप्लेक्सको रुपमा छुट्याउनु ‘बायसनेस’ र ‘इगो’ रहेको बताउँछिन् । फिल्म ‘मालिका’ को छायांकनको क्रममा हल नै नभएको ठाउँ कर्णालीमा आफूलाई दर्शकले चिनेको देखेर आश्चर्यमा परेको सम्झँदै अभिनेत्री रेखाले थपिन्, ‘एउटा नाम परिचित हुन १५/२० वर्ष लाग्नसक्छ । यहाँ त एकै वर्षमा आफूलाई राजेश हमाल ठान्छन् ।’
रेखाको यो झटारो अहिलेका चल्तीका अभिनेता/अभिनेत्रीप्रति रहेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । अचेल दुई/तीनवटा फिल्म हिट भएपछि अभिनेता/अभिनेत्रीले आफूलाई राजेश हमाल वा करिश्मा मानन्धरभन्दा ठूलो ठान्दछन् । नेपाली फिल्ममा प्रयोजित प्रशंसा र आत्मरतीमा रमाउने कलाकारको भीड सानो छैन । विशेषगरि यो अहिलेका चल्तीका कलाकारहरुमा बढी देख्न सकिन्छ ।
फिल्ममा प्रवेश गरेको छोटो समयमा नै आफूलाई सबैभन्दा ठूलो सम्झने प्रवृत्ति हाबी हुनु आत्मरतीमा रमाउनुभन्दा बाहेक अरु केही नभएको रेखा थापाको तर्क छ । उनी अगाडि भन्छिन्, ‘यदी फिल्म क्षेत्रमा ठूलो र उद्दार मन या सृजनाको पराकाष्टको दिमाग र चेतना हुने हो भने सृजनामा लागेको मान्छेहरु तपश्वी जस्तो हुन्छ ।’ अभिनेत्री रेखा अहिले नयाँ फिल्मको तयारीमा छिन् ।
धौली फिल्मको छुटेका भाग हेर्नुस्
निर्देशक घनश्याम लामिछानेको फिल्म ‘पन्चेबाजा’ युट्युबमा रिलिज